जाडो याममा कपडाको कि सर्जिकल मास्क लगाउनु राम्रो ? - Naya Pageजाडो याममा कपडाको कि सर्जिकल मास्क लगाउनु राम्रो ? - Naya Page
जाडो याममा कपडाको कि सर्जिकल मास्क लगाउनु राम्रो ?
काठमाडौं, २१ मंसिर । महामारीको विगत एक वर्ष धेरै मानिसहरुले कपडाको मास्क लगाएरै बिताए तर अहिले जाडोयाम सुरु हुँदा अब त्यसलाई बदलेर सर्जिकल मास्क लगाउने बेला आएको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
पहिलो कुरा त कपडाको मास्कको तुलनामा ‘डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क’ ले धेरै प्रभावकारी रुपमा काम गर्दछ । कोभिडको सुरुवातमा जसरी अहिले यसको अभाव पनि छैन । महामारी सुरु हुँदा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र उच्च गुणस्तरीय मास्क प्रयोग गरिएको थियो तर अहिले सबैतिर सर्जिकल मास्क सर्वत्र उपलब्ध छ । अगस्टमा गरिएको एक अध्ययनमा येल स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीका खोजकर्ताहरुले कपडाको मास्कको तुलनामा सर्जिकल मास्क, भाइरसजन्य तत्वहरु फिल्टर गर्नमा ९५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको पत्ता लगाएको थियो । यता कपडाको मास्क चाहिँ ३७ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी हुने पत्ता लागेको हो ।
यसमा सर्जिकल मास्कलाई दशपटक साबुन पानीले पखाल्दा पनि त्यसको प्रभावकारीता नघट्ने पत्ता लागेको थियो । तर विज्ञहरुले कुनै अवस्थामा डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क पुनः प्रयोग नगर्न भन्दै आएका छन् । युरोपेली मुलुकहरु जस्तै फ्रान्स, जर्मनी अनि अष्ट्रियामा पछिल्लो समय सार्वजानिक स्वास्थ्य अधिकारीहरुले सबैलाई कपडाको मास्कको सट्टामा मेडिकल या सर्जिकल मास्क लगाउन अनुरोध गरिरहेका छन् । त्यहाँ यतिबेला कोभिड संक्रमण अत्यन्तै बढेको छ ।
राम्ररी अनुहारमा फिट भयो भने कपडाको मास्कले पनि केही न केही काम गर्दछ । जस्तै मान्छेले बोल्दा, सास फेर्दा खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा निस्कने थुकका छिटाहरुलाई यसले रोक्न सक्छ । तर पनि हामीले सर्जिकल मास्क लगाएका छौँ भने उल्लेखनीय रुपमा अझ धेरै सुरक्षित रहन सक्ने मिसोरी युनिभर्सिटी अफ साइन्सका प्रोफेसर याङ वाङ बताउँछन् ।
त्यसैले पनि विशेषगरी जाडोयाममा सर्जिकल मास्क नै चुन्दा राम्रो हुने बताइएको छ । यसमा हाम्रो सबैभन्दा बलियो विकल्प भनेको केएन ९५ मास्क हो जसले हावामा भएका ९५ प्रतिशत कणलाई फिल्टर गर्न सक्छ ।
यदि केएन९५ मास्क पाइएन भने अरु नै सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । जसले कपडाको मास्क भन्दा धेरै राम्ररी काम गर्नेछ किनकि कपडाको मास्कमा कहिलेकाहीँ थाहा नपाइ एकदम सुक्ष्म प्वालबाट कणहरु हाम्रो नाकमुखसम्म आइपुग्न सक्छन् । त्यस्तै सर्जिकल मास्कको गुणस्तर एकै समान हुने हुनाले पनि यो लगाउँदा सुनिश्चित हुन सकिन्छ । तर कपडाको मास्क एकै प्रकारको हुँदैन ।
माथिको सूचीमा एन ९५ मास्कबारे चाहिँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । तिनले पनि उच्च गुणस्तरको सुरक्षा दिलाउँछन् तर अझै कोभिडबाट उच्च जोखिम भएका र स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि मात्र प्रयोग गर्दा उत्तम हुने डाक्टर लिन गोल्डमन बताउँछिन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु भाइरस सामु बढी सम्पर्कमा आउने हुनाले पनि तिनका लागि उत्तम मानिन्छ । अहिले अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र, सीडीसीले मजाले फिट हुने कपडाको मास्कले पनि कोभिडको फैलावट रोक्न सक्छ भनेको छ तर अझै सकेसम्म सर्जिकल मास्क या केएन ९५ नै सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प भएको बताउने गरेको छ ।
यसमा मास्क उचित तरिकाले अनि निरन्तर लगाइरहने हो भने त्यो नै सबैभन्दा प्रभावकारी छनोट हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । कपडाको मास्क सजिलो, सस्तो अनि धेरैपटक प्रयोग गर्न सकिने र सँगसँगै फेशनका लागि पनि राम्रो भएकाले नै यसको प्रयोग बढेको छ ।
खोप लगाइसकेको भए पनि सकेसम्म संक्रमित हुनबाट बच्दा नै राम्रो हुने गोल्डमन बताउँछिन् । तर हामी घरबाट नजिकै केही समयका लागि र धेरै मानिसहरुसँग सम्पर्कमा आउन नपर्ने ठाउँमा छौँ जस्तै बच्चालाई स्कुल छाड्न जाँदा या सुपरकार्मेटमा सामान किन्न भने कपडाको मास्क लगाउँदा कुनै फरक पर्नेछैन । तर सर्जिकल मास्क नै भए पनि यदि फिटिङ छैन भने त्यसले काम गर्ने छैन ।
मास्कले हाम्रो नाक र मुखलाई राम्ररी छोपेकै हुनुपर्नेछ । यसमा विशेषगरी नाकमा खुम्चिने रड भएको मास्क उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तै मास्कले हाम्रो चिउँडो मुनिसम्म छोपिरहनुपर्ने हुन्छ र गाला पनि राम्ररी ढाक्नै पर्छ । सीएनबीसी